Filipina: Mihazakazaka Manova Lalàmpanorenana Ireo Mpanao Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2017 23:47 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Septambra 2006)
Hatramin'ny volana Jolay lasa teo, nankasitraka ny tolo-kevitra hanitsy ny Lalàm-panorenana taona 1987 ny filohan'i Filipina Gloria Macapagal-Arroyo. Nampisara-bazana ny firenena ny fanovàna sata na ny Cha-Cha. Amin'ny lafiny iray, manohana ny Cha-Cha ny olona satria mitady fanavaozana marina sy tena ilaina ao amin'ny governemanta izy ireo. Amin'ny lafiny iray hafa, heverina ho paikadim-piavotantenan'ny filoham-pirenena izay mbola miatrika fiampangana hoso-pifidianana sy kolikoly ny Cha-Cha.
Rehefa resy ny fitoriana faharoa hanakanana ny fanohizan'ny Filoham-pirenena ny asany, dia manohy am-pivitrihana ny Cha-Cha ny vondrona mpanohana ny fitondrana ao amin'ny Kongresy. Mandritra izany fotoana izany, mangataka amin'ny Fitsarana Tampony mba hamela ny fanavaozana ny Lalàmpanorenana ny vondrona iray (fantatra fa akaiky ny filoha) izay milaza fa nahangona sonia efa ho 10 tapitrisa .
RG Cruz, bilaogera-mpanao gazety, indray gaga tamin'ny antony nahatonga ny Antenimieram-pirenena nankasitraka haingana ny tatitry ny komity manohana ny Cha-Cha amin'ny alàlan'ny antenimieram-panorenana:
“Boy, do those Congressmen never fail to surprise me. And they did so in under one minute. One minute of deliberations on committee report 1230. 3 hours of debates on the title of 1230 and why they approved it in under one minute.”
“Ry zalahy, tsy mitsahatra mahagaga ahy ireo Kongresy ireo. Ary nanao izany tao anatin'ny iray minitra izy ireo. Fandinihana iray minitra monja momba ny tatitry ny komity 1230. Ady hevitra adiny telo momba ny lohatenin'ny 1230 ary nahoana no nankatoa izany tao anatin'ny iray minitra ry zareo. “
Alleba Politics nanome torolalana ny sampan-draharaham-panjakana mba hiaro ny fahamasinan'ny Hetsika ataon'ny Olona ho toy ny fomba iray hanovàna ny lalàm-panorenana. Mpanohana ny Cha-Cha i Snow World saingy mandà ny fisantaran'andraikitry ny vahoaka.
Pinoy insight nanamarika ny fanadihadiana nasionaly izay mampiseho fa tsy te hanova ny lalàm-panorenana ny vahoaka. Miaiky ny The Citizen on Mars fa tsy mahalala firy ny tombontsoa sy ny voka-dratsin'ny Cha-Cha saingy manaiky ny drafitra hanangana governemanta amin'ny endrika parlemantera.
Philippine Commentary nilaza fa afaka manohana ny Cha-Cha ny Filohan'ny Fitsarana indrindra raha tadidintsika fa nanoratra fanapahan-kevitra mankatoa ny firindran'ny lalàna mamela ny Cha-Cha amin'ny alalan'ny fisantaran'andraikitry ny olona izy indray mandeha.
Nilaza momba ny andinin-dalàna mampifanditra amin'ny Lalàm-panorenana 1987 izay manasongadina ny rafitra momba ny fomba fanatontosana ny fanitsiana ihany koa ilay bilaogera. Tokony hifidy samy mitokana sa miaraka mifidy ireo lapa roa ao amin'ny Kongresy?
Newsstand kosa manome fanadihadiana mazava momba ny “drafi-dalao”-n'ny governemanta amin'ny fanolorana ny Cha-Cha.
Our Times indray miaraka amin'ny vondrona manohitra am-pivitrahana ny Cha-Cha. Manome fanavaozam-baovao tsy tapaka momba ny fanentanana handresena ny ‘Cha-Cha’ ity bilaogy ity. Ity manaraka ity dia ampahany tamin'ny iray tamin'ireo fanambarany an-gazety:
“It goes against all reasonable standards of public morality that those who are railroading this ‘fastbreak chacha’ are the very same ones who will most benefit from the proposed changes that only increase the power of those who already rule the country. This makes the whole exercise patently self-serving.”
“Mifanohitra amin'ireo fenitra ara-drariny rehetra momba ny fitondran-tenam-bahoka izany ka ireo izay mihazakazaka amin'ity ‘chacha fanapaham-pifadiankanina’ ity ihany ireo mahazo tombontsoa amin'ny fanitsiana natolotra izay hampitombo fotsiny ny fahefan'ireo mitantana ny firenena. Izany no mahatonga ny hetsika rehetra hita miharihary fa misy fitiavan-tena.
Solar power manazava ny antony mahatonga ny andinin-dalàna iray ao amin'ny Cha-Cha, ho azo atao ny manohitra ny fananan'ny vahiny fampitam-baovao:
“In the context of mass media, it is possible that foreign investors would only take advantage of cheap and docile Filipino labor and, as in the practice of the U.S. colonizers, provide canned media content that has little regard for the information needs of Filipinos.”
“Mikasika ny haino aman-jery, azo ataon'ireo mpampiasa vola vahiny ny manararaotra ny karama ambany sy ny fahatsoran'ny mpiasa Filipiana ary amin'ny fomba fanaon'ireo mpanjanaka Amerikana US, manome votoatim-baovao izay tsy miraharaha loatra ny filàm-baovaon'ny Filipiana. “
Counsels for the Defense of Libertie (Mpanolo-tsaina ho an'ny Fiarovana ny Fahalalahana) nanao fanangonan-tsonia hitsipahana ny Cha-Cha.
Sigaw ng Bayan, vondrona manohana ny Cha-Cha.